Mayelana - Shenzhen TronHoo Intelligent Technology Co., Ltd.
I-TronHoo 3D - Umholi Wokusungula we-3D Printing Technology
I-TronHoo ingumsunguli ogxile kumaphrinta we-3D kanye nemicu yokuphrinta ye-3D. Imikhiqizo ye-3D yeTronHoo isetshenziswe kabanzi kumkhiqizo we-R & D, ukukhiqizwa kwesikhunta, imboni yezokwelapha, imboni yezokwakha, izesekeli neminye imikhakha. Sithola isisombululo se-3D sokuphrinta esifanele wena, ukuletha ubuchwepheshe bokuphrinta be-3D empilweni yakho.
Amabhizinisi amakhulu weTronHoo afaka amaphrinta e-3D ne-R & D yezinto zokuphrinta ze-3D, izinsiza zokukhiqiza, ezokuthengisa nezangemva kokuthengisa, isixazululo sobuchwepheshe be-3D bokuphrinta, imfundo ye-3D yokuphrinta nezinsizakalo zokuphrinta ze-3D, njll.
Kungani Khetha iTronHoo?
ITronHoo izinze e-shenzhen yase China. Njengamanje, inqwabelene nesipiliyoni esicebile ekubumbeni kwe-3D kanye nesoftware yokuphrinta ye-3D, uhlelo lwezemfundo lwe-STEAM oluhlanganisa ubuchwepheshe be-3D yedijithali, njll., Kanti iTronHoo inamalungelo obunikazi obuningi bezobuchwepheshe.
Isikhungo sokukhiqiza iTronHoo siseJiangxi yaseChina. Inefektri ebekwe emamitha ayisikwele ayi-15,000, imigqa eyishumi esezingeni eliphakeme yokuzenzakalelayo yemicu yokukhiqiza i-3D, amalabhoratri wokuhlola ochwepheshe wemikhiqizo ye-3D.
Nethimba lokukhiqiza elisebenza ngobuchwepheshe obuhle kakhulu. Umthamo wokukhiqiza waminyaka yonke wamaphrinta we-3D ufinyelela amayunithi angama-200,000, futhi amandla wonyaka wokukhiqiza amafilamenti e-3D wokuphrinta afinyelela kumathani ayi-1,500.
I-TronHoo izama ukuletha ubuchwepheshe bokuphrinta be-3D empilweni yakho, futhi ube ngumholi wezinto ezintsha zobuchwepheshe bokuphrinta be-3D!
Ukufuna iqiniso nokuba nepragmatic
Insiza ehamba phambili
Letha ukuphrinta kwe-3D
Intelligent yokukhiqiza isikhungo
Imigqa engu-10 esezingeni eliphakeme yokuzenzakalelayo yemicu yokukhiqiza i-3D amalabhoratri wokuhlola ochwepheshe
imikhiqizo ye-3D Umthamo wokukhiqiza waminyaka yonke wamaphrinta we-3D ufinyelela amayunithi angama-200,000 ngonyaka
amandla wokukhiqiza amafilimu e-3D wokuphrinta afinyelela ku-1,500t.
I-TronHoo inweba izinhlelo zokusebenza zamaphrinta we-3D nezinto ezibonakalayo
Won idumela eliphezulu global 3D iphrinta futhi impahla yokukhiqiza field.
Isikhungo sokukhiqiza esihlakaniphile iTronHoo sakhiwe eJiangxi
Isikhungo sokukhiqiza iTronHoo siseJiangxi yaseChina. It has 15,000 square metres factory standard Isikali sokukhiqiza namandla sihlaba umxhwele kakhulu.
Ukuthuthwa kwendlunkulu yeTronHoo
Amandla we-R & D womkhiqizo, ukuphrinta kwe-3D okubandakanyekile emkhakheni kuyaqhubeka nokwanda.
I-TronHoo iza phambili
Ubuchwepheshe obusha buvame ukuba namandla kakhulu futhi buqhume. Le phrojekthi yethulwe kuyo yonke imibukiso futhi yaheha ukunakwa.
I-TronHoo isethwe ngomkhumbi
Amandla aqhamukayo emkhakheni wokukhiqiza okungeziwe awakwazi ukumiswa!